फ्रेवुअरी 18, 2010 by PRAMB
यो वर्ष ब्लग लेख्दा कसो कसो आफैँ प्रति धेरै असन्तुष्टि भए जस्तो लाग्छ । आफ्नै क्षमता, आत्मविश्वास माथि कुनै विश्वास नभए जस्तो । अघिल्लो वर्षको ब्लग शुभकामनामा मैले एउटा आशा राखेको थिएँ आगामी वर्ष सम्म थोरै भए पनि मेरो लेखाईमा सुधार आओस् । खै कस्तो भएको छ तर आफ्नै बुझाईमा चाहिँ (आफैँ संग नभएको लेखन शैली) झन् खस्कँदै गए जस्तो । झन्, आजकाल पठाईरहँदा पनि लेखहरु पत्रिकामा नछापिँदा त के भन्नु र खै ?
हो, यही बेलो मेरो पि्रय ब्लग साथमा हुन्छ । जब फेसबुक र अन्य मेसेन्जरमा च्याट गरेर वाक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क हुईन्छ तब अन्तिम पालो ब्लगको आउँछ । त्यही बेला लाग्छ ब्लग प्रति एउटा गहिरो भाव छ, ‘आखिर तिमी नै त छौ’ मेरो साथ । साँच्चै वर्षौ देखि प्रकाशित हुन नपाएका र कहिलेकाही आफुले लेख्न चाहेका कुरा कहाँ लेखौँ भन्दा यहीँ आईन्छ । कहिलेकाहीँ त लाग्छ आफ्ना कहिँ नबिकेका विचार र भावहरुको कन्टेनर हो मेरो ब्लग । त्यसैले त आफैँ छापिन्छ आफ्ना मनगडन्ते कुरा । मपाइँ हुन मन लाग्दैन तर नभई बिकल्पै भेट्न गाह्रो हुनथाल्यो ।
जे होस् हालैका दिनमा बिरक्तिएको यो मनस्थितिले त्यही अवस्थामै आफ्नो जन्मदिनको सन्देश यस ब्लगमा राख्न चाह्यो । तर कुनै उत्साह बिनै । आफैँ संग ठगेर के लेख्नु खै ? खासमा लेख्न रमाउने मान्छेले सबैभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो पाठक चाहँदो रहेछ ।
कान्तिपुरमा लेख्न छोडेदेखि सबैभन्दा बढी गुमाएको कुरा पनि मैले त्यही हो ।
स्वदेशि केही र एउटै भए पनि विदेशि पत्रिकामा आफ्नो लेख प्रकाशित नभएको होईन । तर खै छापिएको दिनमा सधैँ एउटै प्रतिक्षा हुन्छ आज राति त मजाले बसेर इमेल चेक गर्नुपर्छ । तर वास्तबमै त्यसतो दिन गएछन्, अब ।
नागरिकमा लेख्न थाले देखि मैले सबैभन्दा बढी इमेल पाएको चेली ज्वाईँ खोई त शिर्षकमा । र, म यति सम्म बुझ्न सक्छु की त्यो यात्रा संस्मरण पढ्नुको ठुलो कारण शिर्षकले गर्दा हो । त्यो बेला थुप्रैले मलाई अलि अर्कै तरिकाले बुझे जस्तो लाग्छ । तर मेरो ठम्याई के पनि हो भने त्यही शब्दहरुमा कुनै फरक शिर्षक थियो भने मानिसले त्यसलाई फरक किसिमले हेर्थे वा कतिले त पढ्दै पढ्दैनथे । त्यही लेख पुरुषले लेखेको थियो भने त्यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा निकै कम हुन्थे, सायद । कति स्पष्ट हुन सकेँ थाहा छैन । यहाँ लेख्दै जाँदा धेरै त्यसता कुरा लेखिन्छन् जसलाई अभिब्यक्त गर्न मन लाग्दैन ।
आजकालको दिनचर्याले म वाक्क दिक्क भईसके । केही कुराले पनि मलाई साथ नदिई रहेको बेला जस्तो । अब चाहिँ म आफू धेरै नै पोखिन चाहेको छु । तर फेरी पनि यी भावना बुझाईहरु अन्र्तमुखि स्वभावले यहाँ सार्बजनिक गर्न नचाहाँदा यी फोटो अपलोड गर्न चाहँदैछु । यो लेखाईमा मैले के लेख्न चाहेर के लेखे केही थाहा छैन, अन्यौलता कति मात्रै छ ? पुग्न चाहेर पनि गन्तब्य समाउन परिस्थितिले नदिए जस्तो वा आफैँले पकड्न नसके जस्तो । अहिलेको मनस्थितिलाई झल्काउने यो फोटो मैले अघिल्लो साँझ आकाश हेरीरहँदा खिचेको थिएँ । अनि, आज नागरिकमा पनि ठ्याक्कै यस्तै फोटो प्रकाशित भएको छ ।
भिन्न र अनौठो, मेरो मनस्थिति जस्तै
मडारिएको आकाशमा पनि रंगको निश्चलता
यी दुबै तस्बिर एकै समय घरको छतबाट लिईएको हो । मात्रै क्यामराको मोड फरक थियो मेरो ……..जस्तै
P.S.यस्तो समय मेरो सबैभनदा नजिक हुने मेरो प्रिय ब्लगलाई फेरी पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना
This entry was posted in monologue and tagged असन्तुष्टि,जन्मदिन,तस्बिर,नैराश्यता,मनोभाव. Bookmark the permalink.
← फिल्मी दुनियाँको असन्तुष्टि
Comparing seasonal changes and life →
Jotare Dhaiba | सेप्टेम्बर 4, 2011 मा 4:22 बिहान
एक वर्षभन्दा बढी समय बितेपछि ब्लगको जन्मदिनमा सार मिलाउन आइपुगेको छु । यी लेखाइहरूको भावदशा केही बुझे जस्तो लाग्दैछ । अपूरो हो कि पूरा ? थाहा छैन ।
पत्रिकामा छापिनु मात्र अभिव्यक्तिको अन्तिम ढोका होइन, मन्च जहाँ पनि बन्छ ।
pramb | फ्रेवुअरी 21, 2010 मा 4:07 अपराह्न
यी शब्दले मलाई सधैँ लेख्न हौर्साईरहनेछन्………….
shikha | फ्रेवुअरी 21, 2010 मा 10:18 बिहान
Bini ko blog lai mero tarfa bata pani janma din ko dherai dehrai subhakamana…sadhai naya lekh/rachana padhna pau…
आकार | फ्रेवुअरी 19, 2010 मा 1:41 बिहान
पत्रिका मा छापिएन भन्दैमा हरेश त खानु भएन नि ! मलाई त लाग्छ, जति लेख्यो त्यति नै लेखाइ मा निखार आउँछ । अनि त्यो, ज्वाँइ खोइ त भन्ने संस्मरण साँच्चै राम्रो छ ।
तपाईको प्रिय ब्लगलाई मेरो तर्फबाट पनि जन्मदिन को धेरै धेरै शुभकामना ! सँधै पढ्नपाइरहुँ ।